OkaMandela uthi abajeze abenza inkohlakalo emngcwabeni kaNelso Mandela | News24
OkaMandela uthi abajeze abenza inkohlakalo emngcwabeni kaNelso Mandela
Cape Town – UMandla Mandela ngoLwesithathu uzwakalise ukukhathazeka ngezinsolo zenkohlakalo ezizungeze udaba lomgcwabo kamkhulu wakhe uNelson Mandela.
Ngemuva kokwethula inkulumo yakhe emhlanganweni okhethekile kuMasipala iKing Sabata Dalindyebo Local Municipality ngombhiko woMvikeli woMphakathi.
Lo mbiko uveza ukuthi yize izwe beligubezelwe yifu elimnyama ngokudlula kukaMandela, kukhona labo abebebheke ukwenza inzuzo enkulu ngomngcwabo yakhe ngokuguqula amanani nokungalandeli imigomo ebekiwe kahulumeni.
OLUNYE UDABA:‘Akuyona imfihlo ukuthi uSfiso Ncwane wathwala ngathi’
Ukhiphe isitatimende sokuthi lezi zinsolo kumele ziphenyisiswe kuze kufikwe enkantolo khona kuzokuba nobulungiswa. Uma kuvela ukuthi lezi zinsolo ziyiqiniso, abathintekayo kumele babhekane nengalo yomthatho.
“Akwamukelekile ukuthi umlando owakhiwe ngokuthembeka, futhi ohlonipheke ngale ndlela udicilelwa phansi ngosomathuba abenza ubugebengu,”kusho yena.
UMvikeli woMphakathi uBusisiwe Mkhwebane ukhiphe lo mbiko oveza ukuthi kusetshenziswe imali elinganiselwa ku-R300m obekumele isetshenziselwe ukuthuthukisa impilo yabahlwempu esifundazweni sase-Eastern Cape, kodwa yasetshenziswa budlabha emngcwabeni walowo owayengumengameli wakuleli uNelson Mandela.